Somali Kanadian oo loo diidan inuu galo Safaarada Kanada ee Kenya | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Somali Kanadian oo loo diidan inuu galo Safaarada Kanada ee Kenya
Somali Kanadian oo loo diidan inuu galo Safaarada Kanada ee Kenya
Waa Dr. Black oo ah Canadian Citizen ee SOOMAALIYA dawladda u shaqeeya. Maanta, waxaa leyga soo ceyriyay Canadian High Commissioner, Nairobi, Kenya.
Waxaan, u tagay in aan basaboor soo cusbooneysiisto oo aan ka dhigto 10 sanno.
Koox, Kenyan ah ayaa ila kulmay iina diiday in aan qof ama qunsulka la kulmo. Waxey, igu yiraahdeen basaboorkaada ma dhacsana ee markuu dhaco noo imaad. Waxaan, iri, “Soomaali ayaan ka imid oo kharash ayaan soo galay mana noqon karo ee basaboorka ha ley cusbooneysiiyo” waa ii diideen. Waxaan, weydiiyay sharci ma jiro diidaayo in basaboorka oo aan dhicin la cusbooneysiiyo? Waxey, i dhiheen January soo laabo hadaad rabto.
Waxaan, iri, “imaatinka Kenya waa adag tahay anigana dawladda ayaan u shaqeeya oo fasax ayaan soo qaatay”. Waxaan, iri “Canada basaboor aan dhicin ayaan la cusbooneysiiyaa”.
Mida kale, waxaan rabaa in aan 10 years ka dhigto oo hadda waa 5 sanno mana u jeedo sabab leygu diido”. Waa, iga dhaqaaqeen waxeyna i yiraahdeen “lix saac wixi ka dambeeya safaarada ma shaqeyso” anigana waan soo baxay.
Marka, wax aan sameeyo ma aqaano waana hubaal haddii Kenya badda laga xakumo in aan tagi karin oo dhibka lana marsiiyay ayaan ogahay. Haddaba, arrintaa ma i qabataa in ley soo ceyriyo? Aaway, wasiirki immigration-ka?
Fadlan, hala gaarsiiyo wasiirka falkaan legula kacay waxna haka qabto inta aan Kenya ka bixin. Waxaan, rabaa in basaboorka ley cusbooneysiiyo oo aan leyga daahinin.
Marka, dadkiina Canada jooga war iiga keena wasiirka immigration-ka.